Azure, အပိုင်းကျွန်မအပေါ် Linux ကို Run ဖို့ကိုဘယ်လို: အဆိုပါအခြေခံ - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
30 မာ 2017
Microsoft ကအနှစ်အရှိဆုံးမကြာသေးမီစုံတွဲတစ်လျှောက်လုံး Linux နဲ့ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အုပ်စုအနည်းငယ်အကြံပြုချက်များအောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Linux ကို SQL Server နှင့် Visual Studio ကအပြေးကနေ Windows ကို 10 အတွက်စစ်မှန်တဲ့အပြာ Bash မှာ shell ကိုပြေးဖို့အရာအားလုံး။ အမှန်စင်စစ် 2016 ၏နိုဝင်ဘာလအတွက် Microsoft ကနေတဲ့ပလက်တီနမ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Linux ကို Foundation မှဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒီအများစုနှင့်အတူကစပိုင်းတွင်အနိုင်နိုင်သိသာဖြစ်စေခြင်းငှါ, ရှုထောမြောက်မြားစွာအချက်များကိုဆုပ်ကိုင်နှင့်လုံးဝ Linux ကို-Microsoft က Azure အားကောင်းရန်အများဆုံးရအရေးကြီးသော Microsoft ကစင်မြင့်ကနေ။ ငါ Azure အပေါ် Linux ကိုပြေးဖို့အဓိကကိုးကွယ်ဆည်းသို့လှည့်ပြီမူလတန်းအကြောင်းပြချက်တစ်ခုသောအဘို့ကိုဝေမျှဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Linux ကို Azure အတွက်လိုင်းကစားသမားတစ်ဦးထိပ်တန်းဖြစ်ပါသည်
ငါ Azure အပေါ် Linux ကိုအပြေးစုံစမ်းစစ်ဆေးစတင်ခဲ့သည့်အခါ, ငါ Azure တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အစွန်းရောက်နည်းလမ်းအသစ်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ငါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ယင်း၏ဖွင့်လှစ်စတင်ကတည်းက Azure (ပွင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အတူကစား) နဲ့အလုပ်လုပ်ပါပြီ။ ငါအခြေခံအုတ်မြစ်ဇာတ်စင်ရန်နှင့်ပင် Azure ၏မူကွဲတဦးတည်းအနေဖြင့်လိုက်လျောညီထွေနှစ်ခုဖို့အင်ဂျင်နီယာဇာတ်စင်ကနေပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သည်။ ငါ Azure အပေါ် Linux ကိုမှပြောင်းရွှေ့စေပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်။
ငါက overthought ထွက်နှစ်မြောက်မွေးနေ့။ Azure မူဘောင်တစ်ခုကို-ယင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်အတော်လေးမကြာသေးမီကဖြစ်ပါတယ်။ Windows, သငျသညျအပြောင်းအလဲတစ်ခုသို့မဟုတ် firewall ကအသုံးချဖို့စင်မြင့်အနည်းငယ်သာလေးစားမှုပေးဆောင်လုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားအတိအကျလမ်းကိုအဘို့အစုံက Linux တို့အတွက်တူညီသောအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရိုးသားဖို့, ကနောကျဆုံးရန်အလွန်နီးပါးအတန်ငယ်ရန်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။
အတော်လေးကြာမြင့်စွာ Microsoft ကအားလုံးအထူးသပြီးပြီနှင့် Linux ကပြောသည်သောအခါအရင်းအမြစ်ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ကမ္ဘာ၏ကျိုးကြောင်းနှင့်ပစ္စည်းများမှတျသားဖှယျတိုးတက်မှုထွက်လှိမ့်နေစဉ်လတ်တလော၏သင်တန်းတွင်။ open source မဟုတ်တော့တဲ့အနုတ်လက္ခဏာအလင်းကျနော်တို့ပြောပါလိမ့်မယ်, တွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထင်ရှားဆုံးနှင့် Linux ကို၏ဆွဲသွင်းပါဝင်သရုပ်သည်အဘယ်မှာရှိအဓိက Microsoft ကစင်မြင့်ရှိရာ Microsoft က Azure ထင်ရသောဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဧကန်အမှန် (သင် Azure အပေါ်မည်သည့် Microsoft ကမိတ်ဆက်မှာကိုနားထောငျမညျဖွစျကွောငျး) Azure ထားသစ်ကိုကို virtual စက်တွေ၏ 40 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ထက် ပို. အခြို့သောအရပျကယ့်ကို Linux ကိုအခြေခံထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ငါသူတို့ကအလွန်ကြီးမားဖြစ်ပါတယ်ကိုမဆိုလမ်းသို့သော်သစ်ကိုပမာဏ၏ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဘယ်မှာအနည်းငယ်နိဒါနျးမှပါပြီ။ 10 နှစ်ပေါင်း backpedaling နှင့်၎င်းတို့၏မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သစ်ကိုအလုပ်၏မှတ်သားဖွယ်နှုန်းမှာ Linux ကိုဖြစ်လိမ့်မည်ဟု Microsoft ကမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြဖို့အရေးကြီးနေသည်။ ဒါကပျော်စရာပါလိမ့်မယ်, သေးငါလွှဲ။
မိုက်ကရိုဆော့ဖနှောင်းပိုင်းတွင်စုရုံးသွားပြီဖြစ်သော်လည်း, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ယခု၌ရှိကြ၏။ Azure အတွက် Linux ကို-based အရင်းအမြစ်များကိုဖော်ဆောင်ရေးအတွက် Windows-based အရင်းအမြစ်များကိုအောင်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ အားလုံးပိုမိုသိသာထင်ရှားစွာ, Linux ကိုအရင်းအမြစ်များကို Azure အတွက်ရနှင့်အသုံးဝင်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရှိသည်။ Microsoft ကအခုတိုက်မြစ်ကိုစင်မြင့်များနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးပေးဖို့အနည်းငယ်တွေကမှားစရာ Linux ကို-based ကုန်သည်နှင့်အတူဝေးသော၏အဖြစ်ရှိပါတယ်။ ပေးသွင်းဥပမာ, Red Hat နှင့် Docker Azure အတွက်မိနစ်အတွင်း၌ဖန်ဆင်းနိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရှိသည်။ open source အုပ်ချုပ်ရေးဥပမာ, Redis ကက်ရှ်နှင့်စားဖိုမှူးလက်ရှိ Azure မူဘောင်အချို့သောအဘို့ကိုတစ်ဦးစင်တာဖြစ်ကြသည်။
ဒါဟာ Azure အတွက် Linux ကိုအရင်းအမြစ်များကိုအောင်နှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်ဘာမှပေမယ့်ခက်ခဲမယ့်
Azure အတွင်းရှိအခြေခံအင်ဂျင်နီယာ Linux ကို Windows အတွက်တစ်ခုနှင့်ညီမျှကစားသမားစေသည်။ သိုလှောင်, စုစည်းနှင့်ကိန်းဂဏန်း: Center ကမိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်သုံးအခြေခံအတန်းသို့ချိုးတော်မူ၏။ Azure အတွက်စွမ်းရည်နှင့်စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်သူတို့ Windows သို့မဟုတ် Linux ကို run နေသလားဆိုတာကိုအလားတူလမ်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာက OS ကိုဆငျခွငျတုံဖြစ်ကြသည်။
အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသောအဓိကအရာတစ်ဦးကို virtual machine ပေါ်တွင်အပြေးပြုပြင်မူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီကြောင်းနှင့်သိသာပြုပြင်မူဘောင်အတွင်းမှ Run တဲ့ Application ။
သင် virtual machine ထို့နောက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မှန်ကန်သောအရင်းအမြစ်များကိုစ Virtual Machine ကိုကြိုးနဲ့တုတ်လုပ်မတိုင်မီ Azure ၌သင်တို့ကိုအခြားအရင်းအမြစ်များအများစုစေနိုင်သည်။ သငျသညျထိုအတူအရင်းအမြစ်များ သာ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုချက်ချင်းအမိန့် line သို့မဟုတ်ဝင်ပေါက်အသုံးချဖို့စေနိုင်သည်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသင်က Windows အရင်းအမြစ်များကိုသို့မဟုတ် Linux အရင်းအမြစ်များကိုလုပ်နေပါတယ်ရှိမရှိအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
အဖြစ်အကြိမ်အနည်းငယ်ငါက Windows ကောင်လေးဖြစ်၏သေးငါခဏ Azure အတွက်အရာအားလုံးဖြစ်စေကြီးကြပ်မယ့် Linux ကို client ကိုအသုံးချဖို့ပြီဟုဆိုသည်။ လက်ရှိတွင်ရိုးသားစွာငါအားဖြင့်၎င်း, ကြီးမားတဲ့ GUI တစ်ခု shell ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချဖြစ်သော်လည်း, ငါသည်ငါ့အလုပ်ချမှတ်ခြင်း၏ သာ. ကွီးမွတျစိတျအပိုငျးအတှကျ Bash မှာ shell ကိုအသုံးချဖို့နဲ့ကို virtual စက်တွေတက်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသည်။ Microsoft ကလုံးဝ Azure ကြီးကြပ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုကြောင်းသင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းချွတ်အခွင့်အလမ်းပေါ်တွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဇာတ်စင်တူရိယာဥပမာ, CLI သို့မဟုတ် XPLAT CLI တစ်ခုအစီအစဉ်ကိုပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးကို virtual machine တလုပ်, သင်အသုံးချမည်ဟု:
ubuntuserver: 14.04.4-LTS: -Q canonical azure VM စေနောက်ဆုံးပေါ် ...
လက်ဝါးကပ်တိုင်ဇာတ်စင်တူရိယာဘာသာစကားဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖွဲ့စည်းပုံအမှန်တကယ်ပညာရှိဖြစ်ပါတယ်။ ငါတကယ်ပါ (Windows ကိုခွအေနအေများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိန့်လိုင်း apparatuses နေသော) ကို PowerShell ပစ္စည်းတွေထက်ပိုပြီးအဖြစ်များသည့် CLI devices များရဲ့တာဝန်ခံဖွဲ့စည်းပုံမှာတွေ့ရှ။
Azure အပေါ် Linux ကို run ဖို့မြောက်မြားစွာထူးခြားသောတွန်းအားရှိပါတယ်။ ငါပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး, အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု, လုံခြုံရေးနှင့် dev-စစ်ဆင်ရေးဆွေးနွေးရန်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာဤဆောင်းပါး၏အပိုင်းနှစ်ယောက်ရှာပါ။ တက်ရဖို့ကိုသင်အသုံးဝင်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးနှင့် Azure အပေါ် Linux ကိုနှင့်အတူအပြေးနှစ်ခုတိုတို, တီထွင်သင်တန်းများလက်ရှိလက်လှမ်းဖြစ်ကြသည်။
ကမ္ဘာ့ဖလား Backup ကိုနေ့ - ထို Pledge ကိုယူမှ Now ကို၎င်း၏အချိန်